Hotel Projects International - Armati Yithini elisezantsi Flow-Ukuhlamba imidlalo: Iindidi, Iinzuzo Iindleko
Armati Yithini elisezantsi Flow-Ukuhlamba imidlalo: Iindidi, Iinzuzo Iindleko
NgoLwesihlanu, Meyi 5, 2017 3: 41: 21 AM America / Los_Angeles
emidlalweni elisezantsi flow- ukuba ahlab The National Policy Energy Act. emidlalweni elisezantsi flow-onokusinika kowu kunye nolondolozo ezibalulekileyo ube nomlinganiselo oluzinzileyo zilungiswe yakho okanye iprojekthi yokwakha. Low imidlalo flow ezifana nezindlu zangasese, amaqhoshana faucet, neentloko uhlamba, onokusinika eluncedo efanayo xa kuthelekiswa imidlalo non-esezantsi-flow.
flow Low abenzi ngumdlalo ziyahluka kwi kwezobugcisa kusetyenziswa, Kodwa banakho ukunikezela kunye neziphumo ezifanayo, kunye neendlela ezintsha ziyaphuhliswa ukuba isetyenziswe imidlalo flow eliphantsi.
Flow Low Heads Shower
iintloko flow imvula sityhafile abo kunye ngesantya esingaphantsi kwama 2.5 GPM noxinzelelo lwamanzi of 80 buziikhilogram-intshi square (PSI). Noko ke, iintloko eliphantsi flow ishawa yakutshanje Unga ukunika ngesantya esingaphantsi kwama 2.0 GPM. Iintlobo ezimbini ezisisiseko okuhamba kwamanzi asezantsi Iintloko ukugeza zezi:
Laminar-flow - Laminar-flow uhlamba intloko iya kuba imijelo yamanzi yaye liya kubonelela nge ulawulo lobushushu yechaneke ngaphezulu.
Aerating - Olu hlobo intloko uhlamba flow aphantsi baya kuzixuba nembewu amanzi kunye nomoya ekwenzeni uhlobo inkungu wesipreyi amanzi. Oku kuya kudala isixa esikhulu zomphunga ukunyakama, kwaye kwimozulu kufumile akunconywa.
iintloko flow ishawa Low kufuneka endaweni abakhulileyo eyenzelwe kunye ngesantya of 5.5 GPM.
Low Izindlu zangasese Flow
zangasese flow Low kunye nezindlu zangasese flow ultra-esezantsi ziye yenzelwe ukusebenzisa isiqingatha umlinganiselo wamanzi zangasese zemveli. zangasese flow esezantsi avareji 1.6 GPF, kunokuba 3.5 GPF.
Uyilo zangasese ezisezantsi-flow iye phantsi emlilweni ngenxa yebango ukuba ezinye iimodeli abakwazi ithoyilethi yangasese ngendlela eyiyo. ubuchule Kamva kunye nokusebenza zangasese ziye zaphuculwa isiqabu ezi ngxaki, kwaye zenzelwe, isininzi, kunye ezinesiqingatha ukhetho ezigungxulwayo inkunkuma emanzi kunye ezigungxulwayo epheleleyo zokulahla inkunkuma eqinileyo.
zangasese abaninzi flow esezantsi kwakhona eyilelwe ukunciphisa iingxaki ucingo kuba hambo semibhobho ebubanzi.
Gravity-Fed Low zangasese Flow - Olu hlobo yokumpompoza yangasese ephantsi usebenzisa ubunzima yemveli amanzi akathi phantsi isitya. Ba futhi konga enengxolo uxinzelelo oluncediswa zangasese flow eliphantsi.
Ingcinezelo-Ncediswa Phantsi zangasese Flow - Olu hlobo yokumpompoza yangasese ephantsi idla noisier kodwa unako kunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi ngama- 45% xa kuthelekiswa zangasese womxhuzulane-ukutya. Le nkqubo usebenzisa uxinzelelo lomoya nakhelwe ngaphakathi itanki tyhala amanzi phantsi.
avuzayo kumgxobhozo Old kananjalo ukuchitha amanzi amaninzi kunye nemali. Kufuneka ucinge ukutshintshwa avuzayo zakho ukuba usebenzisa ngaphezu 2.5GPM. Kukho ezimbalwa iingcamango ukuba uyakwazi ukukhetha ukubuyisela loo faucer lixesha. Ungakhetha ukuba azise faucet entsha, ngokuqhelekileyo ne ngaphantsi kwe 1.5GPM okanye ngokufaka i empompeni. Le empompeni okanye flow restrictir kungongezwa phantse naluphi faucet, esinika ukuba ukuguqulwa lula kwaye cheap ukuba kuya kongela wena ethile imali ekuhambeni kweminyaka.
Iinzuzo Iindleko Ukusebenzisa Phantsi kwemidlalo Flow
emidlalweni elisezantsi flow-ngokuqinisekileyo inokufuna ezinye iindleko ezongezelelweyo ngaphambili ukuba bathenge xa ​​kuthelekiswa kwemidlalo bemveli.
Noko ke, ekubeni Iikhowudi ezininzi zifuna ukuba imidlalo flow eliphantsi, siye sahlaziya ngayo iindleko eza aba uhlobo ngezinto ungongeza ukuba isicelo sakho zokwakha. Kuxhomekeka umenzi, indawo yangasese esisiseko zibiza phakathi $ 75 kwaye $ 450, kuphela lwemidlalo. A flow yangasese eliphantsi lula zibiza malunga $ 100 ngaphezulu ngokuxhomekeke umenzi, kodwa payback ngenxa leyo agent ingaba ngokukhawuleza njengoko emithathu iminyaka ngenxa imali ekusetyenzisweni kwamanzi.
Emidlalweni elisezantsi Flow-Benefits
zangasese elisezantsi flow-uyakwazi ukugcina ngaphezu 20,000 eelitha zamanzi ngonyaka ngamnye ukuba ilungu lentsapho-amane
Ifumaneka kukho uluhlu olubanzi imibala kunye nezimbo.
Elawulwa yi-International Association of Plumbing and Mechanical Amagosa (IAPMO)
Kufuneka ihlangabezane American National Standards Institute efanelekileyo (ANSI)
zangasese namanzi ngendlela efanelekileyo wonge imali kwityala lakho lamanzi ngenyanga.